Litecoin bụ - Blockchain News
Litecoin (LTC) e kere site Charlie Lee, a mbụ Google ọrụ na Ex-Director of Engineering na Coinbase. Litecoin bụ a ndụdụ nke Bitcoin Core ahịa nke e wepụtara site na ihe na-emeghe-isi iyi ahịa on GitHub. Litecoin e wepụtara na October 2011. N'ihi na ezi a ogologo oge, ọ ama nke abụọ cryptocurrency site ahịa okpu. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ na-akpọ ya “digital silver.” Ugbu a, Litecoin abịa isii, adịkwa ka Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash na Cardano. The ahịa okpu bụ $8.383.386.336, na 1 LTC nhata 0,01799050 BTC, ma ọ bụ $152,24. n'ihi na afọ 2017, na price rocketed elu site 1,250%.
The Litecoin netwọk na ndokwa na-emepụta 84 nde litecoins, nke bụ ugboro anọ dị ka ọtụtụ ego nkeji dị ka bitcoin. Dị nnọọ ka Bitcoin, Litecoin na-mined. Otu nwere ike ma na-edu ha kpọchiri ịmalite ma ọ bụ iso a Cloud Mining anyị nwere ike na-akwado ndị a 3 ụlọ ọrụ Hashflare, IQMining ma ọ bụ Genesis Mining. N'adịghị ka Bitcoin na ya SHA256, Litecoin mîdaha a mfe version of scrypt dị ka ya àmà-nke-ọrụ hashing algọridim. Ya ịrụ ọrụ na-adabere kpamkpam na ohere a nnukwu ego nke na ebe nchekwa.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji tụnyere Bitcoin na gold, ekwu ya bụ ezigbo ego nhọrọ. nakwa mgbe, Litecoin pụrụ iwere dị ka ego na-a agbanwere na achọrọ arụmọrụ. Litecoin si ndika ngọngọ ọgbọ oge bụ 2.5 nkeji vesos 10 nkeji maka Bitcoin, nke pụtara ọzọ azụmahịa na ngwa ngwa nkwenye ugboro.
Ọzọkwa, Litecoin ka ọrụ Segregated Onyeàmà (soro) ma gbapụ Lightning Networks (LN), nke budata mma netwọk ikike. Na Atomic dere technology enyere Litecoin na ozugbo gbanwere Bitcoin, Ethereum, Vertcoin, na Decred-blockchains na-eji atọm swaps.
All teknụzụ kwuru n'elu na-akpa ẹkenam na-anwale na Litecoin netwọk. The otu na-mgbe niile na-agbalị ime ka ya ngwaahịa mma. Litecoin bụ ngwa ngwa na ndị ọzọ na-agbanwe karịa Bitcoin, nke na-enye ohere maka na ọ na-agbalị si echiche ọhụrụ na-eji ha ezigbo ngwa ngwa.
Si n'echiche nke m, Litecoin bụ isi na-na kasị njọ-osompi na-adịghị Bitcoin ma Zcash. Ọ na-wuru n'elu Zerocash protocol na-enye nzuzo-echebekwa azụmahịa. Ọ bụ anonymity na mere Edward Snowden pụta na nkwado maka cryptocurrency, akpọ ya “ndị kasị akpali Bitcoin ọzọ.”
Ma site na oru n'akụkụ, Litecoin nwere niile Ohere ka nke kacha mma cryptocurrency maka retail transactions.There nweghị ụzọ Litecoin ike outplay Bitcoin na okwu nke ewu ewu. Ma dị ka cryptocurrency ụlọ ọrụ matures, ole na ole digital ego ga-enwe ike iji nweta ude.
Tweets site SatoshiLite
Coincheck achọ appr ...
bitcoinngọngọ yinyeígwé ojii na NgwuputacryptocurrencylitecoinNgwuputanetwọk
Previous Post:The ọhụrụ protocol Phantom ga mpi na Lightning Network
Next Post:deVere Group malite cryptocurrency trading ngwa